လာလီဂါ ပွဲများအား ပြည်ပတွင် ကစားဖွယ်ရှိခြင်းကို ဘောလုံးသမားများ အစည်းအရုံး ကန့်ကွက် - Yangon Media Group
လာလီဂါ ပွဲများအား ပြည်ပတွင် ကစားဖွယ်ရှိခြင်းကို ဘောလုံးသမားများ အစည်းအရုံး ကန့်ကွက်
စပိန်ဘောလုံးသမားများ အစည်းအရုံးက အမေရိကန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့် လာလီဂါအဖွဲ့တို့အကြား သဘောတူစာချုပ် လက်မှတ်ထိုးခဲ့ပြီးနောက် လာလီဂါပွဲများကို ပြည်ပတွင်ကစားဖွယ်ရှိသည်ဆိုခြင်းအား ပြင်းထန်စွာ ကန့်ကွက်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ICC ဖလား ဖိတ်ခေါ်ဖလား ပွဲကို နှစ်စဉ်ကျင်းပနေသော Relevent ကုမ္ပဏီတို့အကြား ၁၅ နှစ် သက်တမ်းရှိ သဘောတူစာချုပ်ကို လက်မှတ်ထိုးခဲ့ပြီးနောက် လာလီဂါပွဲများကို အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပဖွယ်ရှိ ကြောင်း လာလီဂါအဖွဲ့ကပြောခဲ့သဖြင့် ဘောလုံးသမားများအစည်းအရုံးက အစီအစဉ်ကိုကန့်ကွက် ကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဘောလုံးသမားများအစည်းအရုံးက ”လာလီဂါအဖွဲ့ဟာ သူတို့ အကျိုးကိုပဲကြည့်ပြီး ကစားသမား တွေရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုထိခိုက်မှာကို ထည့်မတွက်ခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌ ဒေးဗစ်အဂန်ဇိုက ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကန့်ကွက်စာတင်ထားသလို ဘောလုံးသမားတွေဟာ တတိယကြားခံအဖွဲ့အစည်းအတွက်ပဲ အကျိုးရှိစေမယ့်စီးပွားရေးလုပ် ငန်းက ငွေကြေးတွေမဟုတ်ဘူးလို့ ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်”ဟု ထုတ်ပြန် ကြေညာခဲ့သည်။
ချဲလ်ဆီးနှင့် ပွဲတွင် ပီတာချက် ပွဲထွက်မည်ဟု အမ်မရီအတည်ပြု၊ ဒဏ်ရာကြောင့် လူငယ် ကစားသမား နို
မမီးမီးသည် ဓနနှင့် အာဏာ မရှိဘဲ နှစ် ၃ဝ ခန့်ကြာ အများအကျိုး ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်ဟု ဦးမင်းကိုနို??
၂ဝ၂ဝ ပြည့်နှစ်တွင် လက်တွေ့ ငြိမ်းချမ်းရေး အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ရန်အတွက် လုပ်နည်းလုပ်ဟန်မျာ
မကွေး တိုင်းဒေသကြီး အတွင်းရှိ နိုင်ငံပိုင် အကြီးစား စက်ရုံများ အရှုံးပေါ်နေသော်လည်း ပိတ်သိမ??